Amathiphu okuthuthukisa isithombe kusuka ku-Expert Semalt
Izithombe ezingaqinisekisiwe zingabangela imiphumela emibi ehlobene nokusebenza kwewebhusayithi. Ezimweni eziningi lapho isivinini sakho sewebhusayithi sihamba kancane, izithombe "ezingalungile" zithwala ingxenye enkulu yecala. Izwe lethu lamanje libhekene nokuncintisana komphetho cishe cishe zonke izimboni. Yingakho amawebhusayithi amancane angakwazi ukusinda ekushiseni.
Jason Adler, Semalt iMeneja Yempumelelo Yomthengi, uxwayisa ukuthi uma umsebenzisi evakashela isayithi lakho futhi ezwa ukuthi kuthatha isikhathi eside ngaphambi kokuba asetshenziselwe, cishe kungenzeka ukuthi bayagxuma kuwebhusayithi yakho yomncintiswano uma ilayisha ngokusheshisa.
Uqinisekisa kanjani ukuthi izithombe zakho zinciphisa isayithi lakho?
Cabanga ukusebenzisa lezi zinsuku eziyisikhombisa zokuthuthukisa isithombe ukuze uthuthukise i-SEO:
1 - oculus oakley masculino femenino. Sebenzisa izithombe zokuqala eziphezulu
Lokhu kuyiqiniso eliyisisekelo elisebenza kuzo zonke izinhlobo zewebhu. Udinga izithombe eziyingqayizivele kakhulu nezokuqala kusayithi lakho uma uhlose ekunikezeni isipiliyoni esingcono somsebenzisi. Uma ungathatha izithombe ngekhamera yekhwalithi enhle noma uthole abaqambi abangakwazi ukudala izithombe zangempela, kungcono ukuthi isayithi lakho lizobe libalwe kakhulu.
Isivivinyo sokusebenzisa izithombe zesitokisi singaba phezulu ngokuzwakalayo. Kodwa-ke, awufuni ngempela ukuba nesithombe esinezigidi zamanye amasayithi.
2. Thuthukisa izithombe zakho ngamathuluzi
Abasebenzisi abanjengezithombe ezingathinti kuphela kodwa futhi ezenziwe ngabanye. Amathuluzi wokuhlela isithombe asakazeka kabanzi kuwo wonke ama-intanethi. Ungahlala uthola ithuluzi elifanele ukwengeza okuthile ezithombeni zakho ngaphambi kokukuthumela ku-intanethi.
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukufaka umbhalo, okuyingqayizivele, ubuntu noma isidingo sokuthuthukisa isikhalazo sakho, kukhona ithuluzi lalokho. Yenza ukusetshenziswa kwamathuluzi wokuhlela isithombe ukuze udale izithombe ezivelele futhi unikeze isayithi lakho umkhawulo.
3. Amagama wefayela ehlongozwayo enegama elingukhiye
SEO imikhuba emihle igcizelela ukubaluleka kokufaka amagama angukhiye kumagama wefayela echaza isithombe. Igama lefayili elinjalo lisazisa Izinjini zokusesha mayelana nesithombe nalokho okukuyo. Uma ulanda izithombe, faka igama elichazwe ngokuzenzakalelayo ngento echaza isithombe ngendlela engcono kakhulu. 4. Nciphisa ubukhulu bezithombe zakho
Unganciphisa usayizi wefayela ngaphandle kokunciphisa ikhwalithi yesithombe. Ngokususa nokucindezela izithombe, ungathuthukisa kakhulu isivinini sesayithi.
Sebenzisa isici esithi "Londoloza IWebhu" ye-Adobe Photoshop ukuqinisekisa ukuthi izithombe eziphelela kuwebhusayithi yakho zinamandla amakhulu.
5. Sebenzisa ifomethi yefayela efanele
Kukhona amafomethi amathathu ajwayelekile wesithombe: i-JPEG, i-PNG, ne-GIF.
i-JPEG iyifomethi ethandwa kakhulu ngoba igcina ubukhulu besithombe encane. I-GIF isetshenziselwa kakhulu izithombe nokudweba okulula. Isekela izizinda ezicacile ngakho-ke iphelele kuma-logos ezinkampani nezinye izakhi zewebhu. I-PNG iyindlela engaphezulu yesimanje kuya ku-JPEG ne-GIF. Le fomethi isekela obala, inokulungiswa kwe-gamma okuzenzakalelayo, nebala elingcono lombala.
6. Lungisa umbhalo wesithombe nesithombe
Umbhalo we-alt nesithombe somfanekiso kufanele udalwe ngokufanele ukusiza iwebhusayithi yakho ifinyelele izinga elihle kuma-SERP futhi inikeze isipiliyoni esihle somsebenzisi.
Umbhalo we-Alt mhlawumbe ungendlela engcono kakhulu yokuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho ibonakala ku-Google web kanye nokuseshwa kwesithombe.
7. Dala izindawo zokubeka izithombe zesayithi lakho
Ukuthuthukisa izithombe ze-SEO kuwufanele ngempela umzamo. Isayithi lakho lilayisha ngokushesha futhi izivakashi zingathola lokho abafuna masinyane. Amawebhusayithi aphansi alahlekelwa ukubonakala, ukwehla kwamazinga okuguqulwa ngakho-ke ukuthengisa nokuthola imali. Amathiphu angenhla azokusiza ukuba ugweme lezi zilahleko.